विपत्तिकै गीत जप्ने कि ! शैक्षिक क्यालेन्डर नबिगारी काम गर्ने तर्किव खोज्ने ?
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, चैत्र ३०, २०७६
पुर्खाले घरमै पढे । घरमै पढाए । शास्त्रीय शब्दावलीमा लैङ्गिक विज्ञता सिकाए । बाबुले छोरालाई पढाएर । आमाले छोरीलाई पढाएर । उनीहरूको रहर होआफ्नोको निरन्तरता दिनु । अहिलेका केटा मात्रै पढेन स्कुल तिनै हुन । केटी मात्रै पढेन स्कुल तिनै...
निजीको नेता किन्ने तागतः शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको जिम्मा भन्न पनि नछाड्ने,गर्दा नि नगर्ने !
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, चैत्र २, २०७६
शिक्षा दिने कसको काम हो भन्ने ठूलो प्रश्न हो । हाम्रा मान्छेहरूले शिक्षालाई सरकारको जिम्मा भने । सरकारको जिम्मामा भन्ने चिन्तन त इङ्ग्ल्याण्डले सुरु गर्यो । साम्यवादी देशहरूले विस्तार गरे । पैसा भएका समाजवादी देशहरूले पनि यो रीत थामे ।...
स्थानीय पाठ्यक्रमः काम थाल्ने कि कुरामै अड्किने ?
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, फाल्गुन १८, २०७६
अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने क्रम विस्तारै सुरु भएको छ । यो अहिलेको चिन्तन भने पक्कै होइन । स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने सोच पंचायतको पालादेखिको हो । त्यो बेलामा २० प्रतिशत स्थानीय पाठ्यक्रमलाई तौल दिइएको थियो तर त्यतिखेर त्यो छुट्टै विषय हुने...
नीति भनेको भोलिका निम्ति सोच्ने कुरा हो, आजलाई मात्र होइन । त्यसैले शिक्षा नीतिमा सोच्नै पर्ने कुरा हो हाम्रो माटोको शिक्षा के हो ? हामीसँग त अचम्मको माटोको शिक्षा छ । हामीले सर्प देख्यौँ भने नमार भन्छौँ । खजुरो देख्यौँ...
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, फाल्गुन ४, २०७६
स्थानीय सरकारको तहमा नीतिगत अन्योल छ । त्यो नीति भनेको शिक्षाको हुन सक्छ, कृषिको हुन सक्छ, वनको हुन सक्छ, स्वास्थ्यको हुन सक्छ । काम योयो गर भनेर तोकिदिएको छ । पालिकाहरूलाई काम गर भनेको छ, गर्यो भने अदालतले उनीहरूलाई काम...
निर्भरबाट यन्त्रमा परनिर्भरः घडीमा होइन, प्रकृतिसँग जिउन बिर्सिएको ज्ञान
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, माघ २६, २०७६
बलेँसीको घाम हेरेर हामी स्कुल जाने गथ्र्यौं । यसरी हामी बलेँसीसँग जोडियौँ । जाडोको बलेँसीको घाम । गर्मीको बलेँसीको घाम । त्यो हाम्रो गणित थियो । काममा जाँदा र फर्केर आउँदा घाम कति जुवा आयो भनेर जोड्ने चिन्तन थियो ।...
पश्चिमा प्रभावमा हराउँदै गएका हाम्रा परंपरागत ज्ञान
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, माघ १९, २०७६
धेरै मान्छेहरूमा विश्लेषणात्मक तागत छ । हामीले काठले दाँत माझ्यौँ । त्यो बाँसको कर्ची हुन सक्ला, पैलेटी हुन सक्ला, पिठौली होला वा निम हुन सक्ला । दाँत माझ्ने क्रममा पहिले त्यसलाई चपाउँदारहेछौँ । चपाउँदाखेरि बंगारा चलिरहन्छ । मेडिकल डाक्टरले पनि...
पिसाब, र्‍याल र सिँगानको उपचार : बुद्धि नहुने मान्छे र औषधि नहुने वनस्पति हुँदैन
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, माघ १२, २०७६
हाम्रो उपचार गर्ने पद्धति र पश्चिमाहरूको पद्धतिमा फरक छ । हामो पद्धति शरीरसँग जोडिन्छ । प्रकृतिसँग जोडिन्छ । मनसँग जोडिन्छ । आत्मासँग जोडिन्छ । आत्मा भनेको शरीर चलाउने ऊर्जा हो । जस्तो : लडेर घाउ भयो भने हामी त्यसैमा पिसाब...
हामीले गुमाएका आफ्नो अंकगणित, बीजगणित र ज्यामिति
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, माघ ५, २०७६
हामी गणितमा जानकार मान्छे हौँ । हाम्रो गणित ठीक छैन भन्ने चिन्तन पश्चिमबाट आयो । परिणामतः हामी जानकारीविहीन भयौँ । हाम्रो त्रुटि, रण, निमेष, काष्ठा जस्ता शब्दहरू छन् । ती शब्दलाई अहिले अंग्रेजीको नानो सेकेण्ड भन्न थाल्यौँ । अहिले न...
रीतिथितिमार्फत संस्थागत र निरन्तर कायम सन्तुलित भोजनको चिन्तन
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, पुष २७, २०७६
हामी कृषिकर्मी हौँ । हाम्रो चिन्तनलाई तीन/चार वटा तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, बजारमुखी चिन्तन,दाश्रो गुजरामुखि चिन्तन र तेस्रो बचतमुखी चिन्तन । हामी गुजरामुखि खेती प्रणालीमा बाँचेका हौँ । खाएर बचे बेच्ने भनेर बसेका मान्छे। हाम्रो संस्कार व्यापारमुखी होइन ।...
भौतिकवादीहरूको अपराधले मासियो ‘पुर्खाको ज्ञान !’
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, पुष २०, २०७६
हाम्रा पुर्खाको ज्ञान अचम्मको छ । अचम्मको ज्ञान किन भने उनीहरूको ज्ञान पढी जान्ने भन्दा पनि परी जान्ने छ । पश्य जान्ने छ । वेदीय ज्ञान देखे जस्तो । अर्थात् ब्रह्ममा सर्वत्र ज्ञान छ भनी बुझेजस्तो । हामीले पढी जान्ने...
परंपरागत ज्ञानको कसीमा ‘इको सिस्टम’, ईश्वर र ब्रह्म ऊर्जा
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, पुष १३, २०७६
संस्कृतिले मानिसलाई थरिथरिको बनायो । भाषाले पनि थरिथरि बनायो । धर्मले पनि थरिथरि बनायो । यी थरिथरिभित्र पनि फरकफक कुराहरू छन् है भन्ने कुराको चिन्तनको विकास नै भएन । समस्या यहाँबाट सिर्जना भएको छ । अब हामीले गर्न सक्ने के...
नकारात्मक चिन्तनको उपज ‘धामी’, ‘बोक्सी’ र ‘वीरमसान’ !
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, पुष ६, २०७६
हाम्रा पुर्खाले चारवटा शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छन् परा,पश्यन्ति, मध्यमा र बैखरी । बैखरी भनेको हामीले बोल्ने भाषा हो । त्यही बैखरी विस्तारै बाह्रखरीमा परिणत भयो । बैखरी र बाह्रखरी भनेको एउटै शब्द हो । बैखरी भनेको शास्त्रीय शब्द हो...
संघीय शिक्षा ऐनमा छुट्न नहुने कुराहरू
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, माघ २९, २०७५
परिवेश पहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्दा संविधान उल्लंघन भयो राजनीतिक सहमतिले, स्थानीय सरकारको आवश्यकताले, राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थानीय सरकारकै तहमै थन्क्याउनुपर्ने बाध्यताले । प्रदेश तथा संघको चुनावमा पनि संविधान मिचियो । तर, अदालत बोलेन । यस अर्थमा अदालतले बेइमानी गर्यो ।...
निजी विद्यालयलाई निषेध होइन, नियमन र सेवामुखी बनाउने भनेका हौँ
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, माघ २७, २०७५
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ । आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा फागुन २१ गतेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।...